Izembozo zobuso ngesikhathi sobhubhane lomkhuhlane we-COVID-19
ⓘ Hong Kong
Ukugqokwa kwezembozo zobuso ngesikhathi sobhubane lomkhuhlane we-COVID-19 sekuthole iziyalo izihlukahlukene kwabezempilo kanye nohulumeni abahlukene. Sekube nenkulumo mpikiswano ngalesi sihloko, lapho khona abasebenzela ezempilo kanye nohulumeni bephikisana ngemigomo yokugqokwa kwezembozo zobuso.
Isifo seCoronavirus 2019 yisifo esithathelwanayo esibangelwa ukuqina kokuphefumula kwe-acute immune coronavirus 2. Lesi sifo saqala ukubonwa ngonyaka ka-2019 eWuhan, inhloko-dolobha yaseChina iHubei, futhi selusabalale umhlaba wonke, okuholele ekutheni ubhubhane oluqhubekayo lwangonyaka ka-2019 ukuya ku-20 lubone. Izimpawu ezijwayelekile zifaka phakathi umkhuhlane, ukukhwehlela, kanye nokuphefumula. Ezinye izinkomba zingafaka ubuhlungu bemisipha, ukukhiqizwa kwesikhwehlela, uhudo, umphimbo obuhlungu, ukulahleka kwephunga nobuhlungu besisu. Ngenkathi iningi lamacala liba nezimpawu ezithambi ...
Hong Kong, eyayaziwa ngokomthetho ngokuthi Hong Kong Special Administrative Region of the People Republic of China, yidolobha ogwini oluseningizimu ye iShayina at the Pearl River Estuary kanye South China Sea. Hong Kong kahle eyaziwa for skyline yayo lubanzi, deep itheku yemvelo futhi extreme ukwanda kwabantu). The labantu lamanje Hong Kong liyizinsuku 93.6% ethnic Chinese. A ingxenye enkulu ye Hong Kong sika isiCanton abakhuluma iningi livela engumakhelwane Canton esifundazweni, kusukela lapho abasebenzi abanamakhono wabaleka emva uhulumeni zamaKhomanisi wathatha phezu China ngo-1949 futhi kamuva kwemijondolo bakhona ngeminyaka yawo-1960.
Ngemva kokunqotshwa China ngo the First War Opium 1839-42 uMbuso waseBrithani, Hong Kong waba koloni laseBrithani ne cession esiphakade of Hong Kong Island, kulandele Peninsula Kowloon ngo 1860 kanye sokuqasha engu-99 of the Territories New in 1898. Ngemuva kwalo kwakuhlezi Japan ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili 1941-45, le British wavuselela control kuze 30 June 1997. Ngenxa ezingxoxweni phakathi China and Britain, Hong Kong wayiswa the People Republic of China ngaphansi 1984 Declaration Joint Sino-British. Umuzi waba China lokuqala Special Administrative Region on 1 July 1997 ngaphansi isimiso "kwelinye izwe, izinhlelo ezimbili".
Towards the late 1970, Hong Kong aphelelwa esungulwe njengoba entrepôt enkulu phakathi kwezwe and China. UMkhandlu sewusungule ibe enkulu global yezohwebo hub and isikhungo sezimali, ebhekwa njengenye idolobha emhlabeni futhi omunye Alpha + imizi eyisishiyagalombili. It zibalwa yesihlanu 2014 Global Cities Index emva New York City, London, Tokyo and Paris. Umuzi enye esiphezulu emalini lengenako in the world, futhi engenayo ukungalingani olunzima phakathi iminotfo eziphambili. It has a high Human Development Index futhi ibekwe kakhulu eMbikweni ukuncintisana Global. Hong Kong lesithathu elaliyisikhungo esibalulekile kakhulu ngokwezimali emva New York and London.The service umnotho, esibonakala by intela ephansi futhi ukuhweba khulula iye njengesinye uMike Mabuyakhulu faire emhlabeni kakhulu imigomo yezomnotho, kanti currency, dollar Hong Kong, iyona 13 currency adayiswa kakhulu emhlabeni.
Limited izwe flat wadala isidingo ingqalasizinda aminyene, futhi umuzi waba isikhungo bokwakha zanamuhla, abahola Hong Kong isihloko kakhulu mpo city. Hong Kong wezwe othuthuke umphakathi network zokuthutha futhi bangamaphesenti angu-90, kweliphezulu Izinga in the world, lincike zokuthutha mass ngomgwaqo noma rail.Air ukungcoliswa uhlala a problem.Loose sína kwekhabhoni nemigomo kwaholela ezingeni lelisetulu nezinhlayiya okwakhiwa.
eHong Kong Itfwala abagibeli kanye imoto emadolobheni ezingaphezu kuka - 120 emhlabeni wonke. Isinqe salo esiyinhloko noma ihabhu isezingeni Hong Kong International
simplified right characters Native to IShayina, Taiwan, Singapore, Hong Kong Macau, Malaysia, IMelika, IKhanada, I - Indonesia, and other places with
ku: Law of the People s Republic of China. Njengoba i - Shanghai kanye ne - Hong Kong zingezinye zezindawo zemfundo esebenza ngeqophelo eliphezulu kakhkulu
Cathay Pacific Limited enkampanini yezindiza abavela eHong Kong. Itfwala abagibeli kanye imoto emadolobheni ezingaphezu kuka-120 emhlabeni wonke. Isinqe salo esiyinhloko noma ihabhu isezingeni Hong Kong International Airport. It ingenye izindiza eziyisithupha emhlabeni ukuze uthole isilinganiso five star kusuka "Skytrax". It won "Airline of the Year" ndondo Skytrax ngo-2003, 2005 no-2009 udade lendiza Dragonair esebenza izindawo kwa mpumalanga Shayina kanye Asia.
Izembozo zobuso ngesikhathi sobhubhan ..